अनिताको अप्रेशन असफल भएपछि भाबुक हुदै बिनोद आए मिडियामा, डाक्टरले फर्काइदिए (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Press
अनिताको अप्रेशन असफल भएपछि भाबुक हुदै बिनोद आए मिडियामा, डाक्टरले फर्काइदिए (भिडियो हेर्नुस्)
January 5, 2021 185
अनिताकै शल्यकृयाका लागि बिनोद काठमाडौ आएका थिए । तर उनको शल्यकृया अहिले नहुने भएको छ । चिकित्सकले अहिले अनिताको शल्यकृया नहुने भनेर फर्काइदिएका छन् । चिकित्सकको यस्तो सुझाव पछि अनिताको परिवार निराश भएका छन् ।
अनिता लामो समय देखि अस्वस्थ्य छन् । अनिताका श्रीमान् विनोद र उनका परिवार स्याहार सुसारमा लागेका छन् । अनिताको घाँटीको शल्यकृया गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस अघि पनि धेरै पटक अनिताको शल्यकृया भइसकेको छ ।
तर अहिले चिकित्कसले तत्काल गर्न नमिल्ने भनेका छन् । सोँचे जस्तो शल्यकृया हुन सकेन तीन महिना पछि ठूलो शल्यकृया गर्नुपर्ने बताइएको छ । चिकित्कसले ट्युव राखेर शल्यकृया गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अनितालाई कन्सेस राम्रो बनाएपछि मात्र शल्यकृया गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिएका छन् । ठूलो शल्यकृया गरेपछि अनिताले टाउको चलाउन नहुने र शरिर पनि धेरै चलाउन नहुने भएकाले अनितालाई त्यस्तो चेतना आइसकेपछि मात्र शल्यकृया गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अनितालाई चेतना राम्रो आइसकेको छैन । बिनोद अब शल्यकृयाका लागि आवश्यक पर्ने पैसा जुटाउन जागिर खाने योजना बनाएका छन् । अनिताको लागि आर्थिक सहयोग पनि आइरहेको छ ।
तर आर्थिक सहयोगको भर मात्र नपरेर आफ्नो काम पनि सुचारु गर्ने योजना उनले बनाएका छन् । अफिसमा मलाई निकै सजिलो छ, मेरो अवस्था देखेर मलाई त्यो सुविधा छ । जहिले गए पनि हुन्छ त्यसैले अब पैसा कमाउन अफिस जान्छु, विनोदले भने
Prevगरिब दिन दुःखी को मन मा बस्न सफल बरिष्ठ सफल पत्रकार भोजराज थापा सरलाई जन्म दिनको भारी शुभकामना
Nextराष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ परीक्षाको नतिजा आउने मिति तोकिदियो
घरमा हुने यी ५ दोषका कारण टिक्दैन साथमा पैसा, कतै तपाईको घरमा पनि छ की ?
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी हेर्नुहोस (3314)
यहा सम्म आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ (3090)
घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ”! (1837)